प्रदेश नम्बर २मा मतगणना जारी - १७ पुष २०२६, बिहीबार ००:००, Purbodaya FM
प्रदेश नम्बर २मा मतगणना जारी
मंगलबार ०३ असोज २०७४ इटहरी न्युजडेस्क –
प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा मतगणना जारी रहेकोे छ। मतगणना सुरु भएका केही ठाउँको प्रारम्भिक नतिजा आउन थालेको छ।
प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। केही स्थानीय तहका वडामा भने नतिजा आइसकेको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार माओवादीले ३, एमालेले ३, कांग्रेसले एउटा र संघीय समाजवादी फोरमले एउटा वडामा विजयी हासिल गरेका छन। धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा माओवादीका सत्यनारायण कुँवर २ सय ८ मत ल्याई प्यानलसहित विजयी हुनुभएको छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको क्षेत्र सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका वडा नम्बर १ को वडाध्यक्षमा माओवादीका मोहन केसी विजयी हुनुभएको छ। बाराको देवताल गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रका पनालाल साह प्यानलसहित विजयी हुनुभएको छ। धनुषाको हंसपुर नगरपालिका वडा नंबर १ को अध्यक्षमा एमालेका कामेश्वर कापर विजयी हुनुभएको छ। पर्साको पटेर्वा सुगौलीको वडा नम्बर १ मा एमालेका फरमान अन्सारी र पर्साकै विन्दबासिनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा एमालेकै सगिर मिया विजयी हुनुभएको छ। सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाको वडा नम्बर १८ को वडाध्यक्षमा संघीय समाजवादी फोरमका मुलेश्वर राय प्यानलसहित विजयी हुनुभएको हो।
सिरहाको लहान नगरपालिका वडा नंबर २ को वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका सियाराम यादव विजयी हुनुभएको छ। सिरहाको गोलबजार र मिर्चैया नगारपालीकामा माओवादी केन्द्रले अग्रता कायम गरेको छ।
त्यसैगरी लहान नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका मेयर पदका उम्मेदवारले ५ सय ६६, नेकपा एमालेले ५ सय ६, संघीय समाजवादी फोरमले ५ सय ६७ र राप्रपा नेपालले ५ सय ३७ मत प्राप्त गरेका छन। धनुषामा नेकपा एमालेले तीनवटा वडामा जितेको छ। धनुषाको हंसपुर नगरपालिका वडा नं. १ को वडाध्यक्षमा कामेश्वर कापर, मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिकाको वडा नं. १मा कौशल यादव र वडा नं. २ मा नरेश यादव विजय हुनुभएको छ। धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा कांग्रेसको मेयरमा ४१५ र उपमेयरमा ३५१ नेकपा एमालेको मेयरमा ३९६ र उपमेयरमा ३८१ मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले मेयरमा ८६ र उपमेयरमा ९७ मत ल्याएको छ भने राजपा नेपालले मेयरमा ७४ र उपमेयरमा १०१ मत प्राप्त गरेको छ।
३ आश्विन २०७४, मंगलवार १०:३८ मा प्रकाशित